သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ
Myanmar’s New President Might Not Be Aung San Suu Kyi, but He Does Represent Progress March 22, 2016 ENGLISH, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Maung Zarni – The Guardian For the first time in decades, the Burmese people haveacivilian president. Now they must weather the clash of military and opposition proxies to come. Myanmar parliament’s official confirmation on Tuesday [15 Mar] that Aung San Suu Kyi’s aide – Htin Kyaw– is to be the
Read More CNN သတင်းဌာနမှ ချီးမွမ်းတင်ပြသော စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးငယ် December 9, 2015 ကမ္ဘာကျော်ကြား မွတ်စလင်များ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများတွင် ထူးခြားသစ်လွင် ကောင်းမွန်သော မွတ်စလင် သတင်းများ ပါဝင်ဖော်ပြမှု နည်းပါးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍအား ထိန်ချန်ထားရှိခြင်းများကြောင့် အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် မွတ်စလင် အမျိုးသမီးငယ် အမာနီ အလ်-ခါတာဘာ (Amani Al-Khatahtbeh) မှ ဦးဆောင်ကာ MuslimGirl.net အမည်ရှိ လွတ်လပ်သော အင်တာနက် သတင်းဌာနတစ်ခုအား တည်ထောင်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမာနီနှင့် သူမ၏ မိတ်ဆွေ (၇) ဦး အပါအဝင် အလွတ်တန်း သတင်းသမား (၃၀) ကျော်ပါဝင်သော MuslimGirl.net အင်တာနက် သတင်းဌာနမှာ လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုအား တစ်ဟုန်းထိုး ရရှိလာခဲ့သလို
Read More အာရှပစိဖိတ် ICT နည်းပညာ ပြိုင်ပွဲ ပါကစ္စတန်အဖွဲ့ ရွှေတံဆိပ် (၃) ခု ဆွတ်ခူး November 30, 2015 Featured Posts, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, အာရှ-ပစိဖိတ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ (Sri Lanka) ကိုလံဘိုမြို့ (Colombo) မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာရှပစိဖိတ် ICT နည်းပညာ ပြိုင်ပွဲ (Asia Pacific ICT Alliance, APICTA 2015) မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ (Pakistan) ကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အဖွဲ့ထဲက ရွှေတံဆိပ် (၃) ခုနဲ့ ငွေတံဆိပ် (၁) ခု ဆွတ်ခူးရရှိသွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို သီရိလင်္ကာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အပါအဝင် နိုင်ငံတကာက သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၇) နိုင်ငံပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ အာရှပစိဖိတ် ICT နည်းပညာ ပြိုင်ပွဲ (APICTA) ဟာ ဒေသတွင်း ICT အော်စကာဆုလို့ တင်စား
Read More ပါကစ္စတန်မှ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး Microsoft Certified ပညာရှင်လေးများ September 1, 2015 ကမ္ဘာကျော်ကြား မွတ်စလင်များ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနမှ တဆင့်ဖော်ပြပါသည်။ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ Microsoft Certified ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းလည်း မဖြစ်နိုင်သလို အလွယ်တကူ လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ Microsoft စာမေးပွဲတွေကို ဝင်ဖြေပြီး အောင်မြင်သွားတဲ့ သူတွေဟာလည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ အတော်ကို မျက်နှာပန်းလှကြသူတွေပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြု တန်ဖိုးထား ဖြေဆိုကြပါတယ်။ အသက်အငယ်ဆုံး Microsoft Certified Professional အဖြစ် ပထမဆုံးစံချိန် တင်ခဲ့သူက တော့ ပါကစ္စတန်ကျောင်းသူ Arfa Abdul Karim Randhawa ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်ကိုးနှစ် အရွယ်မှာ Microsoft ရဲ့စာမေးပွဲတွေကို ဝင်ဖြေပြီး MCP တစ်ယောက် ဖြစ်လာသူပါ။ Microsoft တည်ထောင်သူ